Izwe endlini namuhla - kungcono endaweni elula futhi enza izinto ezihlukahlukene ukuze uhlale. Uma umnikazi yangasese has kungenzeka, ukuhlomisa kusayithi yakho futhi Gazebo, futhi ba nude, futhi ahlukahlukene izindlu. udumo olukhulu nothando uyawuthanda Gazebo nge izoso imibuzo: kukhona yini okungazuzisa ukulungele kangcono emoyeni opholile bese uvula umlilo inyama noma inhlanzi? Nokho, ukuthola injabulo yangempela leli holide, kubalulekile ukuba uhlele endaweni efanele ngoba.
BBQ kanye Gazebo nge izoso?
Yiqiniso, abanye bangase bathi asikho isidingo izinkinga impilo yakho futhi ubheke amaphrojekthi emadokodweni nge izoso. Kungcono ukuthenga noma uzakhe le Iron umsizi futhi nje ukupheka egcekeni. Nokho, zonke ukhetho ikhange nakakhulu kuba ukwakhiwa ukwakhiwa jikelele, ezizohlinzeka isikhala BBQ ngisho izoso. Okunjalo okuhle Arbor izimfanelo eziningi:
BBQ uyovikelwa kusukela emoyeni, emvuleni, futhi ngenxa yokuthi ungakwazi zithokozise futhi izivakashi zakho a inyama emnandi ithenda ngo yimuphi sezulu;
Arbor nge izoso ngoba engadini bangaba uhlobo endaweni umsebenzi, okuyinto izoqoqwa zonke futhi uphumule, futhi ukupheka ukudla.
Ideal - Arbor umile okuzokwenziwa isitini noma hlupha metal efakiwe. ipayipi wakhe uyophuma ngophahla, futhi endaweni ukwakhiwa uzobe ihlukaniswe isivakashi nokusebenza endaweni. Ukugcina izinkuni namathuluzi ehlukahlukene ungathatha odongeni ekhethekile - kulesi simo, konke okudingayo uhlale ususondele.
Pergolas ingadi nge izoso: oyakhayo ngokwabo
Lesi sandiso akuyona nzima kakhulu ngokuya ukwakhiwa, ngakho-ke uma isikhathi kanye nesifiso, ungakha futhi ekhaya. Into esemqoka - ukukhetha kuyiprojekti Arbor yakho ngokuvumelanayo ezihlangene phakathi kwezwe. Elinye iphuzu elibalulekile - kwencazelo isikhala ndawo, futhi lokhu kubalulekile ulwahlukanise yaba izingxenye sokusebenza. Isakhiwo kufanele kube ngokuphelele phakathi umqondo jikelele estate musa abaphazamisa ukuthula amanye amalungu omndeni.
Naphezu kweqiniso lokuthi Gazebo nge izoso ngoba ingadi - a ifomu encane lathumela, ukuzifinyelela kubalulekile ngokuphumelelayo ukwakhiwa. Ngisho ngoba umklamo compact ezinjalo kudingeka ukwakhiwa isisekelo nezinsika B-izinsika, futhi izoso, ngisho phansi. Angase abe mancane, kodwa nakakhulu. Lapho ebeka isisekelo kudingekile ukuba bayakhohlwa amapayipi kanye izintambo zikagesi, uma kuhlelwa. It adlala ezibalulekile ohlelweni indima ukufulela. Phela, kungenzeka ukumisa ehluke kakhulu kanye nomklamo.
Ngokuqondene yezinto ezibonakalayo, lapho ngokuvamile Gazebo nge izoso for yokuhlala ehlobo eyakhelwe kwezinkuni. Kodwa noma kunjalo kubalulekile ukwakha ngendlela yokuthi lahlanganisa izakhiwo ezisele kusayithi. Ngaphezu kwalokho, kubalulekile ukukhumbula ukuthi, naphezu khona kule izoso inkundla, lokhu namanje endaweni sokuzilibazisa, hhayi ekhishini, ngakho kufanele bengaziphathi zonke izitsha lapha ukwakha igumbi lokudlela lapha. Kahle kahle, udinga ukubeka isakhiwo kude izindawo lapho izingane ukudlala, ukuphepha kwabo. Futhi ngomklamo zangaphandle kanye ukukhethwa izixazululo yezakhiwo izinkinga uma kungavela: imiklamo yesimanje ukunikela anhlobonhlobo imibono ezindaweni ezahlukene.
Indlu 9 9: 1 ipulani phansi, 2 emabhilidini
Ukuthuthukiswa kwamakhono ngokusebenzisa ubuchwepheshe besimanje